Alaabaan gamtaa Afriikaa kan Itoophiyaa cinatti miirmirfamuufi - BBC News Afaan Oromoo
Alaabaan gamtaa Afriikaa kan Itoophiyaa cinatti miirmirfamuufi
Alaabaan gamtaa Afriikaa bakka alaabaan Itoophiyaa itti miirmirfamu hundatti cinaa ta'ee akka mirmirfamuufi fi faaruun gamtaa faaruu alaabaa biyyattii walin akka faarfamuf wixineen labsii qophaa'ee kaabineef dhiyaachuu isaa dubbi himaan ministeera dhimma alaa Mallas Alam ibsa har'a kennanin himan.
Murteen kun biyyaalee miseensoota gamtaa Afriikaatin bara 2013'tti murtaa'e kun mariin uumataa erga irratti taasifame fi hojiin hubannoo uumuu erga hojjetamee booda hojiirra akka oolu dubbatan.
"Murteen kun murtee mootummaan Itoophiyaa obboleeyyan keenya biyyoota Afriikaa garaagaraa Itoophiyaa akka biyya isaaniitti Finfinnees akka magaala guddoo isaaniiti akka ilaalan taasisuuf fudhatedha" jechuun Mallas Alam himan.
Lammiileen Ertiraa Finfinneetti hiriira bahan
Kana malees walgahiin addaa 11ffaa gamtaa Afrikaa milkaa'inaan fi haala faayidaa lammiilee Itoophiyaa eegsiseen xumuramee kan jedhan dubbi himaan kun rifoormiin gamticha keessatti taasifamu bifa faayidaa uummata keenya eegsiseen akka adeemsifamu hojjetameera jedhan.
Walgahicharrattis preezidaantootni 17, ministirawwan mummee lama fi itti aantootni ministira mummee sagal waliigalattis hooggantootni olaanoo 28 hirmaataniiru.
Hooggantootni Itoophiyaa gara biyyaalee biroo osoo hin deemin baasii xiqqaan hooggantoota biyyaalee fi dhaabbilee walin asumatti akka mari'atan taasisuunis danda'ameera jedhan Mallas Alam.
Ministirri mummee Abiy Ahimad, preezidaant Saahilawarq Zawdee fi ministirri dhimma alaa Dr Warqinah Gabayyoo hoggantoota biyyaalee akka Keeniyaa, Sudaan, Jibuuti, Afriikaa Kibbaa, Tuuniziyaa, Giinii fi Angoolaa akkasumas hoggantoota dhaabbilee idil addunyaa walin mari'ataniiru.
Taanzaaniyaa waliinis lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessatti argaman 224 dhiifamni godhameefii gara biyyaatti akka deebi'an irratti waliigalameera jedhan.
Kana malees daandiin xayyaaraa Itoophiyaa gara magaaloota gurguddoo biyyaalee lixa fi kibba Afrikaatti balallii akka eegaluf gaafin aangawoota biyyaalee irraa dhiyaachusaas dubbi himaan ministeera dhimma alaa himaniiru.
'Dr. Abiy keessummaan isaa jalqabaa Afrikaarraa' akka ta'u fedhu
Bu'uura nagaa eegsiiftoota Gamtaa Afrikaa irratti haleellaan baname yaada biyyaaleen tokko tokko lakkoofsi hojjettoota tajaajila waliigalaa gamtaa Afriikaa 'quota' dhaan yaa ta'u jechuun dhiyeessan mormuun faayidaan lammiileen Itoophiyaa gamticha keessatti hojjetanii akka eegamu taasifameera jedhan Mallas Alam.
Kana malees yaadni ministirri mummee Abiy Ahimad misooma humna namaa irratti dhiyeesan fi yaadni lakkoofsi komishinarootaa gamtichaa saddeet turan gara jahaatti akka hir'atuf dhiyaate fudhatama argachuunsaanii milkaa'inawwan Itoophiyaan walgahii kanaratti argatte keessaa isa biraati jedhan.
Fooramiin diinagdee Chaayinaa fi Itoophiyaas akka adeemsifamu kan himan dubbi himaan ministeera dhimma alaa Mallas Alam fooramii kanaratti hirmaachuf jiilli diinagdee namoota 100 ta'an of keessatti qabate Finfinnee galuusaa himan.
Jiilli kun turtii isaa Finfinneetin angawoota ministeera dhimma alaa, dhaabbilee daldalaa fi abbootii qabeenyaa walin ni mari'ata.
Somaaliyaa Al-shabaab: bu'uura nagaa eegsiftootaarra haleellaan qaqqabe
''Keessummaan jalqabaa Finfinneetti affeeramu Afrikaa irraa akka tahu barbaadama''
24 Caamsa 2018